समाचार संग्रह: फिल्मनेपाल डट कम
७० केजीकी ऋचा
काठमाडौं । सुन्दर रुप र जीउडाल मिलेको शरिरसहितको अभिनय नै कलाकारहरुको सम्पति हो । अझ नायिकाहरुमा त यो कुरा झनै बढी लागू हुन्छ । त्यही भएर त शारीरिक सुन्दरताका लागि उनीहरु मरिमेटेर लागिरहेका...
सेक्स सिनले नायिका हैरान!
काठमाडौं । जति शरिर देखाउन सक्यो उति नै सिनेमामा हिट बनिन्छ भनेर लागिपर्ने नायिकाहरु समेत अब भने गल्न थालेछन् । 'कथाले मागेपछि के गर्नु ?' भन्ने ओठे जवाफ फर्काउनेहरुको समेत अहिले भने यस्तो सिन...
हेरेरै बढी 'इन्ज्वाई'
काठमाडौं । पर्दामा नाच्ने अधिकांश कलाकारहरु तिहारको देउसी भैलो भने खेल्न छाडेछन् । फिल्म नेपालले सम्पर्क गरेका अधिकांश कलाकारले उमेर बढेसँगै देउसी भैलोको रस सुक्दै गएको बताए । उखानै छ नि, 'खेल्नेलाई...
१० वर्षपछि विमलेषको विशेष वर्थडे
काठमाडौं । झण्डै दश वर्षपछि नायक विमलेष अधिकारीले आफ्नै जन्मथलो विराटनगरमा २९ औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । फिल्मी करियर शुरु गरेसँगै उनले आफ्नो जन्मदिन काठमाडौंमा मनाउँदै आएका थिए । 'लामो समयपछि...
सुन्दरीका गोप्य कुरा
काठमाडौं । पर्दामा चिटिक्क देखिने कलाकारहरुको गेटअप देखेर सर्वसाधारणले समेत नक्कल गर्छन् । कपाल त्यही शैलीमा मिलाउँछन्, हिंडाइको चाल पनि आफ्नो मनपर्ने कलाकारकै जस्तो बनाउँछन् । अझ फलानो नायकनायिकाजस्तो...
ओबामाको जितमा दंग नेपाली कलाकार
काठमाडौं । अमेरिकाकामा बाराक ओबामा पुनः राष्ट्रपति बनेर नेपाललाई के फरक पर्छ ? विश्व महाशक्ति भएको नाताले सार विश्वको ध्यान खिचिनु स्वभाविकै हो । नेपालमा चुनावकै बारेमा राजनीतिक दलहरुबीच...
रेखाको गीतमा बिनिता छमछमी
काठमाडौं । सिनेमा 'किस्मत'को दिल यो दिल गीतमा कम्मर मर्काएकी थिइन्, हट नायिकाको पगरी पाएकी रेखा थापाले । पछिल्लो समय रेखाले नै 'अबकी हट नायिका' उपमा दिएकी अर्की नवनायिका बिनिता बराल यही गीतमा छमछमी...
कालोसूचिबारे केही थाहा छैनः विपना
काठमाडौं । तीन महिना अघि ऋण असुली न्यायधिकरणमा आफू विरुद्ध परेको मुद्दाबारे कुनै जानकारी नभएको नायिका विपना थापाले बताएकी छिन् । ११ साउनमा विपनाले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि गाडी खरिदका लागि...
सोत्तर भए सिनेमा
काठमाडौं । 'मैले हिजोका दिनमा निकै मिहेनेत गरेको थिएँ, सो सिम्पलका लागि । हिजोको मिहेनतले मलाई आज कसरी निराश बनाउन सक्ला र ?' 'सो सिम्पल' सिनेमाका पटकथा लेखक प्रदीप भारद्धाजले सिनेमा रिलिज हुनुभन्दा...
तीन दशकका दर्पण
काठमाडौं । पत्रकारिताबाट फिल्मी क्षेत्रमा छिरेका निर्देशक सुरेशदर्पण पोखरेलको उमेरले तीन दशक पूरा गरेको छ । उनी १९ कात्तिकबाट ३० वर्ष लागेका छन् । तीसौं जन्मदिनमा उनले नजिकका केही साथीभाइलाई...
हास्यकलाकार सन्तोष पन्तकी आमा रहिनन्
काठमाडौं । चर्चित हास्यकलाकार सन्तोष पन्तकी आमा इन्दिराको मृत्यु भएको छ । पन्तकी ८६ वषर्ीया आमाको काठमाडौं धापासीस्थित निवासमै १६ कात्तिकमा निधन भएको हो । सन्तोष पन्त हास्यव्यङ्ग्य टेलिफिल्म...
नेपाली नायिकाहरुको प्रेम छचल्कियो
काठमाडौं । बलिउडकी अभिनेत्री करिना कपुर र सैफ अली खानले सँगै पाँच वर्ष बिताएपनि उनीहरुको सम्बन्धबारे सीमित व्यक्तिबाहेक कसैले सुइँको पाएनन् । विवाह हुने सार्वजनिक गरेपछि मात्रै धेरै मानिस...
अस्ट्रेलियामा खिचाइन् झरनाले सेक्सी फोटो
काठमाडौं । नव प्रवेशी नायिकाहरुले बिना हिच्किचाहट हट सिन दिन थालेपछि पुराना नायिकाहरु झस्किनु स्वभाविकै हो । अझ सिनेमामा अभिनेत्रीहरुको समयावधि एकदमै छोटो हुने ठानिन्छ । उमेर उक्लिएसँगै...
किन आयो उदयको अचानक राजीनामा ?
काठमाडौं । चलचित्र संघका महासचिव प्रदिप उदयले अचानक पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामाको कारण व्यक्तिगत व्यस्ततालाई देखाएका छन् । तर केही हलवाला र संघका पदाधिकारीसँग कुरा नमिलेपछि उनले...
नायिका निशा त एनआरएन पो !
काठमाडौं । आधा दर्जनभन्दा बढी सिनेमामा अभिनय गरिसकेकी नायिका निशा अधिकारी गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ? नेपालमै बसेर काम गरिरहेकी निशालाई एनआरएन भन्दा कमैले पत्याउँछन् । तर उनी अमेरिकामा बसोबास...